नेपालमा कोरोना बढेसँगै बेसारको खपत बढ्योः यस्ता छन, बेसारका फाईदा र बेफाईदाहरु
बेसार कति सेवन गर्दा हानि हुँदैन ? विस्तृतमा हेर्नुहोस्
प्रकासित मिति : २०७७ भाद्र १३, शनिबार प्रकासित समय : १८:३४
काठमाडौं । हाम्रो भान्सामा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने बेसारमा औषधीय गुण भएको कुरा वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्।
कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएका बेला शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता सुदृढ बनाउन बेसार सेवन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार दिने गरेका छन्।
बेसारले शरीरमा उत्पन्न विषाक्ततालाई नष्ट गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय बेसारको आयात ह्वात्तै बढेको देखिन्छ जसको सीधा साइनो खपतसँग जोडिएको जानकारहरू बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ूमानव शरीरमा बेसारको महत्त्वबारे धेरै अनुसन्धान गरिएको छ र यसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका छन्। तर बेसारको अत्यधिक प्रयोगले भने दीर्घकालीन रूपमा समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ।
तराई र पहाडी जिल्लामा भान्सामा तरकारी र दालमा प्रयोग हुने बेसारको मात्रा ठिक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।अत्यधिक बेसार सेवन मिर्गौलामा समस्या भएकाहरूलाई खतरामा पार्ने तथा एलर्जीदेखि क्यान्सरसम्मको खतरा रहने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै कलेजोमा पनि यसले समस्या पार्ने बताइन्छ।
अत्यधिक बेसार सेवन गर्दा हुने हानिबाहेक बजारमा उपलब्ध बेसारको गुणस्तर पनि चिन्ताको विषय हो। नेपाली बजारमा उपलब्ध बेसारमा लेड क्रोमेट मिसाइएको पाइने गरेको छ। उक्त अखाद्य मिश्रण बेसारमा पहेँलो रङ्ग ल्याउनका लागि प्रयोग गरिन्छ।
त्यसबाहेक विद्यालयहरूमा प्रयोग हुने खरी (चक) र स्टार्च मिसाइने गरेको पाइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। तर विगतमा जस्तो एकदमै धेरै परिमाणमा त्यस्तो मिसावट भने हुने गरेको पाइएको छैन।
बजारबाट सामान आफैँ ल्याएर गरिने परीक्षण र बेसार लगायतका मसला उत्पादन गर्नेहरूको सामान अनुमति लिने वा त्यसको नवीकरण गर्ने बेला अनिवार्य परीक्षण गरिने हुँदा समस्या घटेको छ, विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले भनिन्।
आर्थिक वर्ष २०७६, ७७ मा कुल ११० नमुना परीक्षण गरिएकामा पाँच छ वटामा सामान्य समस्या देखिएको उनले बताइन्। त्यसमा खानै नहुने खाले वस्तु प्रयोग भने नभएको तर सामान्य सरसफाइ लगायतका विषयमा भने किसानहरूलाई सतर्क बनाउनुपर्ने देखिएको उनी बताउँछिन्।
नेपालमा भारत, म्यान्मार र इथियोपियाजस्ता देशहरूबाट बेसार आयात गरिने गरेको भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ। आफैँले खेतबारीमा रोपेको बोटबाट सङ्कलित कन्दबाट निर्मित धूलो बेसारमा शुद्ध हुन्छ। तर बजारमा उपलब्ध बेसारमा मिसावट भएको हुन सक्छ।
मिसावटको प्रचुर सम्भावना रहने हुँदा सकेसम्म खुला रूपमा कारोबार गरिने बेसार नकिन्नु उपयुक्त हुने विभागको सुझाव छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका विज्ञसहितको एउटा समितिले मानिसले आफ्नो तौलअनुसार प्रतिदिन चारदेखि आठ ग्रामसम्म बेसार सेवन गर्न उचित हुने निचोड निकालेको डा। बखिम बताउँछिन्।
बेसारमा कर्क्यमिन नामक रासायिक पदार्थको मात्रा एक प्रतिशतभन्दा तल नघटेको हुनुपर्ने राजपत्रमा प्रकाशित फुड स्टयान्डर्डमै उल्लेख गरिएको छ। डा. बखिमका अनुसार कर्क्यमिनको मात्रा तीन प्रतिशत ननाघेको बेसार राम्रो हुन्छ।
बेसारले शरीरमा ताप पैदा गर्ने हुँदा विशेषतः गर्मी मौसममा कम खान उचित हुने उनी बताउँछन् । खरेलका अनुसार बेसारले शरीरमा जलन कम गर्ने काम गर्छ। बुढेसकालमा हात पाखुरा दुख्ने समस्या हुन नदिन पनि बेसारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन्।
त्यस्तै एन्टी अक्सिडन्ट गुणका कारण छिट्टै छाला चाउरी नपर्ने जस्ता फाइदा हुने विज्ञहरू बताउँछन्। विभिन्न गुणका कारण बेसारलाई परम्परागत र आयुर्वेदिक औषधिमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई रङ्गका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
पानीमा बेसार नघुल्ने बरु चिल्लोमा घुल्ने हुँदा दूधमा मिसाएर पिउँदा लाभ हुने विज्ञहरू बताउँछन्। कर्क्यमिन कहिलेकाहीँ हाम्रो आन्द्राले सोस्दैन। तसर्थ दूध र बेसारमा थोरै मरिच मिसाएर पिउँदा अझ राम्रो हुन्छ। तर यो पनि अत्यधिक मात्रामा सेवन नगरै मात्रै हो, खरेलले भने। बीबीसीबाट
मोरङ । मोरङमा विद्युत सर्ट भई शनिबार एक व्यक्तिको घरमा आगलागी भएको छ ।